There is no relationship between 969 and Neo-Nazi. If muslim customs have rights not to buy product from Myanmar merchants, buddhist customers also have rights not to buy product from Muslim merchants. Isn't that simple?
မြန်မာပြည်ကို ကယ်တင်ဖို့မပြန်တော့ဘူးလားဗျ။
အပြင်ကနေ မီးရှို့ နေတာပဲ ကောင်းတယ် ထင်နေလား။
30 March 2013 at 04:22
Tomahawk ရော အမည်မသိ လူကြီးမင်း ရော
နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ
မင်း ဆရာမိုးသီးက အပေါ်မှာ Michael Learn To Rock နဲ့U2 နှစ်ဖွဲ့ တောင် တဖွဲ့ တည်း ထင်ပြီး ယူတူးအဖွဲ့ သတင်းဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသေးတယ်။ ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်။ ဆောက်ရူးလို့ ပြောတာမလွန်ပါဘူး။
မူလစ် ဆန်ကျင်ရေးတဲ့ ရေးချင်ဇောနဲ့ လား။ အမှန်မသိတာလား။ ပြောရရင် အမှားတစ်ထောင်နဲ့ဘလောဂ်။
နာမည်ကြီး မြောက်ပိုင်းလူသတ်သမား သင်္ကန်ကျွန်းသားကြီးက
လူသတ်ကောင်ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးကို စွတ်ဆွဲနေသေးတယ်။ အ၀ိစ္စိ ကျမယ့်ကောင်